Madaxweynaha Turkiga oo la filayo in uu safar xal raadin ah ku bixiyo Wadamada Khaliijka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Turkiga oo la filayo in uu safar xal raadin ah ku...
Madaxweynaha Turkiga oo la filayo in uu safar xal raadin ah ku bixiyo Wadamada Khaliijka
Madaxweynaha Dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in uu wadamada Khaliijka ku bixiyo Safar labo Maalmood ah Si u xal ugu raadiyo khilaafka u dhaxeeyo dalka Qadar iyo isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in uu gaaro Dalka Sacuudiga halkaasi oo uu kulamo kula Qaadan doono Boqorka Dalka Sacuudiga Salman Bin Abdi Aziz iyo Dhaxal Sugaha boqortooyada Mohammed Bin Salman asagoo kala hadli doono sidii xal looga gaari lahaa khilaafka Wadamada Khaliijka .
Erdogan ayaa intaas kadib usii safri doono dalka Kuwait oo ka mid ah wadamada uusan saameynin khilaafka Khaliijka isla markaana u taagan in uu dhax dhaxaadin iyo waan waan ka dhax sameeeyo Wadamada Walaalaha ah ee Khilaafka ka dhaxeeyo Waxa uuna uga sii gudbi doonaa Dalka Qadar.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay maalintii Jimcaha in ay dadaalada xal raadinta ah wadi doonaan ilaa heshiis laga dhax dhigo dalalka walaalaha ah ee khilaafka ka dhaxeeyo.
Previous articleAwaamiir cusub oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya
Next articleWadooyinka galo Magaalada Xudur oo laga sifeeyey Kooxda Al-shabaab